अमेरिकामा पनि जातकै कुरा- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस (मार्च २१)
चैत्र ८, २०७६ दिवाकर बागचन्द
न्युयोर्क — म जातिप्रथा मान्दिनँ । बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकरको जातिवादको अन्त्य (एन्हिलिसन अफ कास्ट) पढेपछि मेरो मान्यता झन् प्रगाढ भएर आयो । एन्हिलिसन अफ कास्टमा अम्बेडकरले जातिप्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
मलाई पनि के लाग्छ भने विभेदको जड जात हो। जातिप्रथा हो। त्यसैले, जातिप्रथाको अन्त्य हुन आवश्यक छ। जातिप्रथाको अन्त्य भने त्यति सजिलो छैन।
केही दिन पहिले मलाई न्युयोर्कमा रहेकी दिदी रिमा नेपाली (नाम परिवर्तन) को फोन आयो। फोनमा दिदीले ‘भाइ म अप्ठेरोमा छु, भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु’ भनिन्। मैले दिदीलाई ज्याक्सन हाइटमा बोलाएँ। मलिन अनुहार लिएर दिदी भेट्न आइपुगिन्। दुई दिदीभाइ एउटा रेस्टुरेन्टमा बस्यौं। दिदीले मलाई एउटा फ्ल्याट खोजिदिन भनिन्। मैले सोधे, ‘किन दिदी तपाईं बसेको फ्ल्याटमा के समस्या छ?’
उनले दिएको जवाफ उदेकलाग्दो थियो। आफ्नो फ्ल्याटमा बस्ने अन्यले उनलाई जातिसूचक शब्द प्रयोग गरेर घोचपेच गर्ने गरेको सुनाइन्। फ्ल्याटमा बस्ने कथित उच्च जातिकाले आफूलाई ‘दमाइ/कामी घुरे झैं घुरेको’ भनेर हेलाहोँचो गर्ने गरेको उनले दुःखेसो पोखिन्। ‘केही समय नजरअन्दाज गरेँ, अब मेरो आत्माले मान्दैनँ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो घुराइसँग समस्या हुनु स्वभाविक होला तर घुराइलाई जातसँग जोड्नु कत्तिको जायज छ? यो त बायोलजिकअल प्रक्रिया हो। के अन्य जातकाले घुर्दैनन्? नेपालमा त विभेद भोगियो, यहाँ भोग्नुपर्ला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ।’ यति भन्दाभन्दै दिदी रुन थालिन्। म हेरी रहेँ। उनलाई रोक्न सकिनँ। मलाई लाग्यो उनले रुन जरुरी थियो।
रिमा दिदी नेपाल र नेपाली भन्दा हुरुक्कै हुन्छिन्। तर उनी आफ्नै नेपाली समुदायबाट जातीय विभेदको सिकार भइन्। त्यहीं पनि सात समुद्र पारी। जातीय विभेदको पीडा असह्य हुन्छ। सायद त्यहीं पीडा सहन नसकेर दिदीले आफूसँग घटेको घटना मसँग बाँडेकी थिइन्। मेरो मानसपटलमा भने रत्न विश्वकर्मा र चमेली परियारको तस्बिर दौडन थाल्यो।
रत्न छात्रवृत्तिमा पढ्न आयोबा राज्यमा आएका थिए। पढाइ सकाएर रत्नले साथीमार्फत न्युयोर्कमा बस्न कोठाको व्यवस्था गरे। न्युयोर्क पुग्दा रात परिसकेको थियो। उनी आफ्नो कोठामा पुग्दा उनलाई जीवनकै ठूलो ‘सरप्राइज’ कुरेर बसेको थियो। फ्ल्याट मालिकले उनलाई कोठा दिन नमिल्ने बताए। कारण थियो, जात। ती घर मालिकले भने, ‘तपाईंको साथीले तपाईंको सही थर बताएनन्। सरी तपाईंलाई कोठा दिन मिल्दैन। तपाईं विश्वकर्मा हुनुहुँदो रहेछ।’
चमेली परियारको कथा पनि फरक छैन। जातकै कारण फ्ल्याट नपाएका थुप्रै अनुभव छन उनीसँग। ‘तपाईंको जात के हो जस्ता प्रश्नको सामनादेखि नेपालबाट मान्छे आउँदै छन्, तपाईंलाई कोठा दिन मिल्दैन’ जस्ता रेडिमेड जवाफको उनले सामना गरेकी छन्।
केही दिन भित्रै रिमैा दिदीका लागि फ्ल्याट खोजियो। दिदी स्वतन्त्रसँग एक्लै बस्न थालिन्। मलाई भने दिदीको व्यथाले पछ्याइ रह्यो। एउटै प्रश्नले मन व्याकुल भइरह्यो। आखिर किन गरिब हुन्छ देश?
अमेरिकामा रंगभेद नभएको होइन। तर अमेरिकी समाजको विशेषता के हो भने विभेद गोराले गर्छन् र काला जातिको पक्षमा पनि गोरा जाति नै खडा हुन्छन्। जसलाई रंगभेदको आरोप लाग्छ उसले कानुनी कारबाही भोग्नै पर्छ। त्यो व्यक्तिका लागि ‘किस अफ डेथ’ सावित हुन्छ रंगभेद। रंगभेद विरुद्ध शून्य सहनशीलता पाइन्छ यहाँ। सायद यसै कारणले अमेरिका अनेक विषमताका बाबजुद सभ्य र उन्नत समाज मानिन्छ।
कुनै पनि देशको सम्पन्नता उसको सामूहिक चेतना, सोचमा निर्भर गर्दछ। जुन देशमा जन्मको आधारमा आफूलाई सर्वोच्च ठानिन्छ, जुन देशमा सीप त स्वीकार्य हुन्छ तर त्यहीं सीप गर्ने शिल्पिजन अछूत हुन्छ, त्यो देशको विकास कसरी सम्भव छ?
नेपालबाट सुनौलो सपना लिएर आएकी रिमा दिदी जातीय प्रताडनबाट यति आहत भइन् कि आफूले माया गर्ने नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहिनीबाट टाढा जान बाध्य भइन्। नेपाली समाज मनोवैज्ञानिक रुपमा एक हुन नसकेको कुरा रिमा नेपाली दिदीको यस भोगाइले पुष्टि गर्छ। नेपाली समाज सदैव विभिन्न जातमा विभक्त रह्यो। एउटा बन्द समाज रह्यो। अन्तरघुलनले अवसर नै पाएन।
जुन दिन रिमा नेपाली, रत्न विश्वकर्मा र चमेली परियारहरुले आफ्नै नेपालीबाट विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था रहेन छैन त्यही दिनदेखि नेपाल सही अर्थमा खुला समाज बन्नेछ। विधिको शासन कायम हुने छ। विकास हुनेछ। लोकतन्त्र फस्टाउने छ। अनि जातीय विभेद अन्त्य हुने छ। फेरि जातकै कुरा गरिरहनु पर्ने छैन। प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १६:०७
कोरोना राेकथामका लागि अमेरिकासँग एक डलर पनि लिएका छैनौं : चीन
चैत्र ८, २०७६ एजेन्सी
बेइजिङ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को प्रकोपले विश्व आक्रान्त भइरहँदा अमेरिका र चीनबीचको वाकयुद्ध फेरि सतहमा आएको छ । कोभिड–१९ उत्पत्तिदेखि यसको रोकथामका विषयलाई दुई देशबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । शुक्रबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चीनले नोवल कोरोना भाइरस पत्ता लाग्नेबित्तिकै यसको रोकथामका लागि महत्वपूर्ण कदम नचालेको आरोप लगाएका थिए ।
भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि पनि चीनले लाखौं मान्छे बाहिर जान दिएको उनले आरोप लगाएका थिए। पोम्पियोले वुहानबाट इटालीलगायतका देशमा थुप्रै मान्छे गएको आरोप लगाएका थिए। बिहीबार रातिदेखि कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा इटालीमा धेरै भइसकेको छ। पोम्पियोले चीनले लापरबाही गरेका कारण धेरै मानिसको ज्यान जोखिममा पारेको आरोप लगाएका थिए। तर चीनले शुक्रबार साँझ अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोको आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुन्यिङले अमेरिकाले हुँदै नभएको कुरा बनाएर भनेको बताएकी छिन्। ट्विटरमा अंग्रेजी भाषामा ट्वीट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘भ्रम नफैलाउ।
डब्लुएचओका विज्ञहरुले भनिसकेका छन्, चीनको अथक प्रयासका बीच लाखौं मानिसहरु संक्रमण हुनबाट बचेका छन्।’ चीनले अमेरिकालाई जनवरी ३ मै कोभिड–१९ को बारेमा जानकारी दिँदै वुहानमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको प्रवक्ता चुन्यिङ बताएकी छिन्। ‘अहिले आएर ढिला गर्यो भनेर चीनलाई आरोप लगाउने? साँच्चिकै?,’ उनले ट्विटरमा लेखेकी छिन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागसले पनि चिनियाँ समकक्षी चुन्यिङको कुरा सही भएको बताउँदै अहिले सबै मिलेर यसको खोजीमा लाग्नुपर्ने बताएकी छिन्।
पहिलेदेखि टकरावको अवस्थामा रहेका चीन र र अमेरिकाबीच कोभिड–१९ को महामारीले सम्बन्धमा झन् तिक्तता ल्याएको छ। त्यस्तै महामारीका बारेमा सत्यतथ्य उजागर गर्छन् भनेर वुहानबाट चीनले केही अमेरिकी पत्रकारलाई फिर्ता पठाएको भन्ने पोम्पियोको अभिव्यक्तिको पनि चुन्यिङले खण्डन गरेकी छिन्। ‘यदि त्यस्तो हो भने चीनले ६० जना आफ्ना पत्रकारलाई मार्च १३ सम्म घर फर्कन देउभन्दा अमेरिकाले किन नदिएको त?’ प्रवक्ता चुन्यिङले लेखेकी छिन्। अमेरिकालाई आफ्नै राजनीतिक व्यवस्थाप्रति भरोसा नभएर चीन र चिनियाँ पत्रकारसँग डराएको हो भनेर उनी सोध्छिन्। ‘यदि अमेरिकालाई आफ्नो राजनीतिक सर्वोच्चतामा विश्वास छ भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ सञ्चारमाध्यमसँग किन यति धेरै डराउँछ?,’ उनी सोध्छिन्।
साथै अमेरिकाले चीनलाई एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेकोमा अमेरिकी नागरिकलाई धन्यवाद दिँदै चुन्यिङ लेख्छिन्, ‘अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनलाई सय मिलियन डलर सहयोगको प्रस्ताव राखेको बताएका छन्। अमेरिकी नागरिकको सद्भाव र सहयोगका लागि धन्यवाद। तर साँचो कुरा के हो भने हामीले अमेरिकासँग एक डलर पनि लिएका छैनौं। के डब्लूएचओलाई तिर्न रहेको पैसा अमेरिकाले तिर्यो त?’ साथै अमेरिकी राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरसलाई ‘चाइनिज भाइरस’को संज्ञा दिएकोमा पनि चीन रुष्ट बोको छ।
सन् २०१५ बाटै कुनै पनि रोगको नाम भौगोलिक क्षेत्र, राष्ट्रियता, क्षेत्रीयता र आदिवासी जनजातिलाई जोडेर राख्न नहुने डब्लएचओले अभ्यास गर्दै आएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छिन्। अमेरिकी रोक नियन्त्रण केन्द्रकै अनुसार मौसमी ज्वरोका कारण ३६ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएको र २२ हजार व्यक्तिको मृत्यु हुँदा डब्लुएचओले अनुसन्धानका लागि अमेरिका विज्ञ किन नपठाउने भनेर उनले प्रश्न गरेकी छिन्। अमेरिकी नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सही सूचना र पारदर्शी विश्लेषणको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएकी छिन्।
डब्लुएचओले गत डिसेम्बरमा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानबाट सुरु भएको यो संक्रमणलाई कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) संज्ञा दिए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने बारम्बार ‘चाइनिज भाइरस’ भनिरहेका छन्।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १६:०२
मोदीको मुस्लिमफोबिया : नेपाललाई साइड इफेक्ट